musha > Travel Europe > Best European Train Routes
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 28/08/2020)
Kamwe vagabondize ruzivo kunyaradza, kurerukirwa uye mukuru chinoshamisa chitima kufamba, zviri kudzoka zvakaoma upenyu kwerubwinyo rwakagara rwuripo njanji. Kunyanya kana tiri kutaura pamusoro Best European chitima pakutengeserana muzhizha. A kondinendi pamu yevedza migwagwa, nharaunda zvinoshamisa uye pachisara pamusoro incredible dzokugara kuti gawk pa.
Dzidzisai kufamba ari nokure kupfuura yevedza uye hwomutambarakede kuti kumativi Europe, uye pane dzimwe nzira kuti zvichaita zvechokwadi akasaridza pfungwa dzako, kunyanya panguva chirimo!
Best European chitima pakutengeserana: Dzidzisai of Pignes, Furanzi
The Eurostar nemamwe chitima mitsetse kusuma kakawanda mabasa. uye Hotels vaenzi vari kure-chinenge prices. Pane jeka mazuva mbiri kana unogona kuva chokunwa uye kunyange kudya panze.
Discover njanji ichi private, inopfuura kuti yakaisvonaka kumatunhu muFrance. Provence ndiyo inozivikanwa pezvawakaita uye wakajeka nharaunda, zvirokwazvo rwendo ipfungwa yakanaka, uye zvechokwadi mumwe Best European chitima nzira kutora! On its way the chitima unopfuura nzizi, mabhiriji, misha midiki yakanaka saSt Andre les Alpes uye Entrevaux kusvika kwazosvika kwekupedzisira - Digne les Bain - guta guru reAlpes-de-Haute-Provence mudunhu.
nzira: Nice-Digne les Bains
chinguva: 3 maawa, 145 ? km
Kana kuenda: chitubu, chirimo, kuwa
Best European chitima pakutengeserana: The West Rhine Railway, Jerimani
The Rhine harisi chete imwe nzizi akanaka kwazvo muEurope, asi zviri mumwe anokosha waterways yacho wacho. It inoyerera vamwe 1,320 makiromita kubva Siwizarendi zvose nzira kuNetherlands neGungwa North. Mumwe kunakidza zvikamu ichi rwizi simba runoyerera kuburikidza Middle Rhine Valley Germany (Rheintal), imwe nzvimbo hunoshamisa runako. Saizvozvo, ari tatamuka erwizi anomuitira kubva Mannheim kumaodzanyemba kusvikira Koblenz kuchamhembe unozvirumbidza girl saka zvinoshamisa kuti hombe chikamu, nezvavo savakuru Rhine Gorge (Rheinschlucht), akanzi ane UNESCO World Heritage Site.
Nemhaka yaro zhinji nematende uye maguta nenhoroondo, tatamuka iri Rhine ane kwemazana emakore vanyori vemifananidzo, vanyori, uye vanyori, uye chokwadi mumwe Best European chitima yenzira panguva mwaka yezhizha.
Chitima chinofamba pamwe nerwizi rweRhine uye chinoratidza nzvimbo dzakanaka yeGermany. Matombo dzakatenuka pamwe yemizambiringa, vakwegura nhare pamusoro pavo - unogona kuwana chitima uye kushanya asi kunozivikanwa Lorelei dombo iri St. Goarshausen, rinokwira 120 M pamusoro Rhine. A rinakire nzira, pavaifamba mumaguta aya akanaka German.
chinguva: 185 ? km
Kana kuenda: chirimo, kuwa
The Rauma Railway, Noweyi
The Rauma Railway anova dzakawanda akakurumbira pakati vashanyi, sezvo anova mumwe Best European chitima yenzira muchirimo. A rwendo pamusoro njanji ichi kunokunyaradza pedyo zvikuru hunhu pakati Andalsnes uye Dombas.
The rwendo pakati Dombas uye Andalsnes ndiye 114 ? km refu uye zvinotora 1 awa uye 40 maminitsi. The chitima unopfuura 32 mabhiriji – kusanganisira yakakurumbira Kylling Bridge, 59 metres pamusoro Rauma rwizi – uye nepano 6 tunnels. The chitima ane mahwindo huru, kubvumira kuti kuvimba shure uye tichinakirwa nakisa nzvimbo dzokuona. The chitima zvakare anoenda yapfuura yakakurumbira Trollveggen – ari Troll rusvingo, Europe-soro perpendicular gomo rusvingo.
Spring ndiyo nguva yakanakisisa kutanga kuenda. The chitima anomhanya kunyanya kunonoka kuburikidza nzvimbo dzokuona dzakanaka. It Anodzivisawo nokuti mifananidzo pa Kylling Bridge uye Troll rusvingo, dzinomutungamirira vachakupai ruzivo kuburikidza nevakurukuri, uye uchadzidziswawo kugamuchira bhurocha mashoko pamusoro pfungwa huru rwacho.
chinguva: 1.5 awa, 114 ? km
Kana kuenda: chirimo
Bernina Express, Switzerland kuItaly
Kuhwina Alps muna Bernina Express zvechokwadi ndeimwe Best European chitima nzira vanoshanyira Europe! Munziramo, ari Bernina Express akakungurutsa Hollywood-mhanya pamusoro 65-mita-soro Landwasser Viaduct, ari siginicha nemamiriro Rhaetian Railway uye UNESCO World Heritage Site.
Pamwe chitima ichipfuura 55 tunnels uye pamusoro 196 mabhiriji nenzira kwayo kubva Chur kuna Tirano. Vafambi vabatwe kuti zvinoshamisa zvinotyisa panguva yavo rwendo, kufanana Montebello munyonga ane maonero Bernina massif, ari Morteratsch rechando, vatatu munyanza lej Pitschen, Lej Nair uye White Lake, ari Alp Grum uye Brusio Circular Viaduct. In chirimo, nerwendo inogona yaibva Tirano kuna Lugano mune Bernina Express Bus.
chinguva: 4 maawa, 123 ? km
Akagadzirira Chivhaira kupinda Best European chitima pakutengeserana? Save A Train anogona kukubatsira, anokurumidza uye nyore Réservation NO mari zvakavanzika! What mhepo!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-train-routes%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#scenictravel europetravel longtrainjourneys summerholidays chitima mazano